NayaPatro Blogs: यी ९ सूत्र अपनाए सेयरले दिन्छ सुनको अण्डा !
हरेक लगानीकर्ता निकै ठूलो कमाईको आशामा सेयरमा लगानी गर्छ, तर हात लाग्छ निकै न्यून रिटर्न मात्र । इक्वीटी इनभेष्टमेन्टले घरेलु तथा वैश्विक अर्थव्यवस्थाको वृद्धिमा सोझै सहयोग हुन्छ, यसले स्वयम् व्यक्तिको सम्पत्ति समेत बढ्छ ।
त्यसो त सदियौंदेखि यो पनि प्रमाणित भएको छ कि इक्वीटी नै सम्पत्ति कमाउने एउटा सर्वोत्तम तरिका हो । तर, यसमा नसोचेको नोक्सानी समेत व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्ने यथार्थलाई भूल्नुुुहुुन्न । त्यसो भए आखिर कुन विधिबाट इक्वीटी मार्केटमा लगानी गर्दा चाँदीकटाई होला त ? बजारका दिग्गज विज्ञहरुलाई मान्ने हो भने ९ सामान्य तरिकालाई पछ्याउन सक्ने हो भने एक सामान्य लगानीकर्ता सफल बन्नसक्छ । हेरौं बजारमा सफलता पाउने ९ सूत्र:
लगातार लगानीको चमत्कार
कुनै पनि सफल लगानीकर्ताको एक मुख्य विशेषता भनेकै उसले आफूले गरेको लगानीबाट प्राप्त नाफालाई पुनः लगानी गर्नु हो । उसलाई थाहा हुन्छ कि एक निश्चित अवधिपछि आफ्नो लगानी बढेर कयौं गुणा भइदिन्छ । हुन त यो सुन्नलाई जति सजिलो लाग्छ, लगानी कयौं गुणा बनाउन उति सजिलो छैन, यसका लागि कठोर अनुशासन र निश्चित अवधिसम्म कुर्नसक्ने क्षमता हुनुपर्छ । सुरुवातमा जब फाइदा हुँदैन, यस्तो बेलामै अधिकांश लगानीकर्ताले धैर्य गुमाइदिन्छन्, तर सफल लगानीकर्ता प्राय हतारो देखाउदैनन् र लामो समयसम्म बजारमा टिकिरहन्छन् ।
तर, यसको ठीक उल्टो कर्जा लिएर सेयरमा लगानी गर्नु घातक हुनसक्छ । उतारचढावले भरिपूर्ण बजारमा लगानीमा ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्छ, यस्तो बेलामा कर्जाको ब्याज समेत निकै बढ्न पुुग्छ । विज्ञहरुले निकै अप्ठ्यारो नपरुञ्जेलसम्म आफ्नो सेयर बिक्री गर्ने हतारो गर्न नहुने सुुझाव दिने गर्छन् । राम्रो कम्पनीमा लामो समय टिक्ने हो भने आफ्नो लगानी दुुईगुणासम्म बढ्नसक्छ । उत्कृष्ट सेयरबाट कमाई गर्ने मुुख्य मन्त्र धैर्यता रहेको उनीहरु बताउँछन् ।
हल्लामा ध्यान नदिने
जब सेयर बजारले शानदार बढोत्तरी हासिल गर्छ र सूचक एउटा नयाँ उचाईमा पुुग्छ त्यसबेला बजारमा निकै ठूलो खैलाबैला मच्चिने गर्छ । त्यस्तो बेलामा अनुुभवहीन मानिस सेयर खरीद गर्छन् र बिक्री गर्छन तथा कुनै अनुुभव नभए पनि अरुका अगाडि ठूला ठूला गफ हाँक्छन् । यो तरिका जूवाडेहरुसँग मिल्छ, असल लगानीकर्ताले यस्तो हर्कत देखाउँदैन । जुवाडेले सामान्यतया धेरै पैसा गुमाइरहेको हुन्छ, तर फेरि पनि जित्ने आशामा उसले जूवा भने खेल्न छाडिरहेको हुँदैन ।
लगानीअघि कम्पनीलाई बुुझ्ने
कतिपय अवस्थामा मानिस विजिनेशलाई बुुझ्दै नबुुझी सेयर खरीद गरिरहेका हुन्छन् । पछिल्लो समय नेपाली सेयर बजारमा अनेकौ कम्पनी आएका छन्, लाखौं सेयर सूचिकृत छन् । यस्तो भीडमा सही सेयर छान्नु चुनौतिपूर्ण हुन्छ । त्यसकारण कुनै पनि सेयर खरीद गर्नुअघि अध्ययन तथा विचारविमर्शको आवश्यकता पर्छ । जसरी हामी कमाईका लागि कलेजमा पढ्छौ र त्यहाँ प्रोफेशनल कोर्स गर्छौ, ठीक यसैगरी आफ्ना आसपासका विजिनेशमा ध्यान दिइरहने हो भने सेयर बजारमा शानदार कमाई गर्न सकिन्छ ।
बित्तीय स्वास्थ्य पत्ता लगाउने
कम्पनीको बित्तीय स्वास्थ्य पत्ता लगाउनसक्ने हो भने यसबाट सेयर बजारको गुणस्तरीय सेयर छान्न मद्धत पुुग्नेछ । विश्वकै चर्चित लगानीकर्ता वारेन बफेटले लगानीका आफ्ना २ महत्वपूर्ण सूत्रको बिषयमा बताएका छन् : एक कुनै पनि कम्पनीले लगातार गर्दै आएको खूद नाफाको प्रतिशत र दोश्रो मूल्य आम्दानी अनुपात(पीई रेसियो) । यसरी जुन कम्पनीको खूद नाफा लगातार बढ्दो क्रममा हुन्छ, त्यहाँ लगानी गर्नु उचित हुन्छ । बैंकको ब्याजदरभन्दा कम प्रतिशत नाफा गर्ने कम्पनीमा लगानी गर्नबाट बच्नुुपर्छ । कुनै पनि कम्पनीले कति वर्षमा लगानीकर्तालाई उसले गरेको लगानीमा निरन्तर लाभ दिन सुरु गर्छ भनेर पत्ता लगाउने विधि पीई रेसियो हो । अर्थात, कम भन्दा कम पीई रेसियो भएको सेयरमा लगानी गर्नु उत्तम मानिन्छ । पीई रेसियो १५ देखि २० गुणा भएका कम्पनीमा लगानी गर्नु राम्रो मानिन्छ । तर, कुनै कम्पनीको मूल्य तीव्र रुपमा लगातार बढिरहेको छ भने त्यसबेला पीई रेसियो मात्र हेर्नुुहुन्न, अन्य इण्डिकेटर हेरेर पनि लगानी गर्न सकिन्छ ।
लगानीको सही समयको छनौट
हामी किरानाका सामान तथा सब्जी खरीद गर्दा समेत हडबडाउँदैनौ, बरु यी वस्तु सस्तो हुने प्रतिक्षा गर्छौ र मूल्य कम भएको समयमा ठूलो परिमाणमा किनेर स्टोर गर्छौ । सेयर बजारमा समेत यही नीति अपाउनुुपर्छ । यसका लागि आफ्नो मन परेको कम्पनीको एउटा सूचि तयार गर्नुपर्छ र थोरै थोरै लगानी गर्न सुरु गर्नुपर्छ । जब मूल्य घट्छ, तब सेयर खरिदारी बढाउनुपर्छ र त्यो बेला बिक्री गर्नुहोस्, जुन बेला तपाईका साथीभाई वा छिमेकीमाझ तपाईले खरीद गरेको कम्पनीको मात्र चर्चा सुरु हुनथाल्छ ।
उथलपुुथलमा धैर्य नगुमाउने
सफल लगानीकर्ता निकै धैर्यवान हुन्छ । उसले आफ्नो भावनालाई आफ्नो लक्ष्यमाथि हाबी हुन कहिल्यै दिंदैन । उसले बजारमा मच्चिने हलचलको कुनै पनि असर आफ्नो सेयरमा पर्न दिंदैन । सेयर बजार कमाईमा निर्भर हुन्छ । यसकारण बजारमा हलचल हुँदा राम्रो कम्पनीको सेयर थोरै मूल्यमा खरीद गर्ने अवसरको रुपमा बुुझेर सही लगानीकर्ताले त्यहीबेला आफ्नो खरिदारी बढाउँछ।
असल लगानीकर्ता सधैं आफ्नो लगानीको क्षमताको बिषयमा जानकार हुन्छ । उसले निकै गहन रिसर्च पनि गर्छ र कम्पनीको विश्लेष गर्छ । गुणस्तरमा समेत ध्यान दिन्छ र त्यस्तो कम्पनीमा लगानी गर्छ, जसको प्रोडक्ट्स तथा नीति उसलाई मन परेको होस् । यसरी एउटा लगानीकर्ताले आफ्नो रिसर्चको क्रममा जुन कुरा आत्माविश्वासहित निक्र्यौलको रुपमा निकाल्छ, त्यसमा धक फूकाएर उसले लगानी गर्छ ।
साना सेयरको लालचमा नफस्ने
राम्रो लगानीकर्ता बन्ने हो भने सानातिना सेयरको लालचमा फस्नुुहुन्न । सफल लगानीकर्ताले साना सेयरमा गरिएको लगानी डूूब्न पनि सक्छ भन्ने कुरा राम्ररी बुुझेका हुन्छन् । यस्ता सेयरमा फाइदा भन्दा बढी नोक्सानीको संभावना हुन्छ । त्यसकारण साना कम्पनीको सेयरबाट सधैं बच्नुुपर्छ ।
धेरै गञ्जागोल पोर्टफोलियो नबनाउने
लगानीकर्ताले सफलता प्राप्त गर्ने हो भने आफ्नो पोर्टफोलियोलाई धेरै गञ्जागोलपूर्ण बनाउनुुहुन्न । आफ्नो पोर्टफोलियोलाई विभिन्न प्रकृतिका कम्पनीहरुको सेयरले भरिपूर्ण बनाउनुहोस् र निकै सोचविचार गरेर मात्र लगानी गर्नुहोस् । राम्रो लगानीकर्ताले बारम्बार आफ्नो रणनीति कहिल्यै परिवर्तन गर्दैन, उसको ध्यान भविष्यकेन्द्रीत हुन्छ । उसलाई थाहा हुन्छ कि कम्पनीबाट पाउने लाभांशलाई पुनः लगानीको रुपमा लगाउँदा त्यसबाट राम्रो कमाई गर्न सकिन्छ ।